Izinto eziKhangeliweyo zokuBekwa kwinqanaba lokuLungelelaniswa 2013 | Martech Zone
Izinto eziKhangelwe kwiNqanaba lokuLungelelaniswa kwe2013
NgoLwesine, uJuni 27, 2013 NgoLwesine, uJuni 27, 2013 Douglas Karr
DK New Media kutshanje ungene kunye Iimpawu zokukhangela kwaye ngoku sonyusa isuti yabo njengelungu apha Martech Zone. Isizathu esiphambili kukuba ngomnye wabambalwa Zixhobo ze SEO ejolise kakhulu kwimpembelelo yezentlalo kunye nenqanaba njengezinye izinto zemveli ze-SEO.
Ngawaphi amaphepha ewebhu abekwe kakuhle nguGoogle anento efanayo kwaye yintoni eyahlula kumaphepha asezantsi? Iimpawu zokukhangela zivavanye ii-URL ezingama-300,000 ezibonakala kwizikhundla eziphezulu zeziphumo zobukho kunye nobungakanani beepropathi ezithile. Iziphumo zibonisiwe ngokwemiba yendlela ezi zinto (izinto) ezinxibelelana ngayo nenqanaba likaGoogle (usebenzisa Ulungelelwaniso lwamanqanaba eSpearman).
Le ngxelo ibanzi kwaye ayichazi gwenxa idatha (unobangela xa kuthelekiswa nolungelelwaniso) njengoko uninzi lweenkampani zokwenza uphando lweinjini yokukhangela kunye neengcali zenzayo. Eyona nto iphambili siyithathileyo yimpembelelo yeendlela ezisemgangathweni zokukhangela ezidityaniswe nokwabelana noluntu…. Wowu!
Uqoqosho lwe-Viral Going
Jul 12, 2013 ngo-5: 10 AM
I-infographic elungileyo. Imiqondiso yezentlalo kunye noGunyaziso lukaGoogle zizinto ezibaluleke kakhulu ekufumaneni inqanaba elifanelekileyo kwi-SERP.